ရန်ကုန်မြို့ လမ်းဘေးတွေမှာ မကြာခဏ တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ မြင်ကွင်းတခု | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Entertainment » ရန်ကုန်မြို့ လမ်းဘေးတွေမှာ မကြာခဏ တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ မြင်ကွင်းတခု
ရန်ကုန်မြို့ လမ်းဘေးတွေမှာ မကြာခဏ တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ မြင်ကွင်းတခု
Posted by စေန on Feb 22, 2011 in Entertainment | 30 comments
from – http://www.burmastrangenews.com/
စည်ပင် က ကွမ်းတံတွေး ထွေးဖို့ ချထားတာ မဟုတ်လား။
နိုင်ငံတကာမှာ .. အဲဒီလိုမြင်နေရတာပါပဲ..။ ပူတဲ့ရာသီပေါ့..။ အခုလို အေးနေတဲ့အချိန်ော့ မဟုတ်..။
အခုနောက်ပိုင်း.. တက်တူးလေးတွေ အဲဒီနေရာမှာထိုးထားပြီး .. ပြကြတာ..။
တချို ့ကတော့ .. အတွင်းခံကို ..ဒီဇိုင်နာဘရမ်းကောင်းကောင်းဝတ်ပြီး ..ပြတာ..။
ဗစ်တိုးရီးယား စကရက် လို ဘရမ်းတွေလည်း ပါတယ်ပေါ့..။
ဇာလေးတွေတောင်.. မြင်ရသေး..။ စက်စ်စီပေါ့လေ..။
you are marvelous,
I think, you live in US &
You have not returned back to Burma recently.
Then, How do you know sucharecent trend in Myanmar ?
Sure, Burmese girls in Myanmar wear like this now.
Actually, they want other to see ( intentionally highlight ) this area
by making “Tattoo” there.
သဂျီး နေရာတကာနှံ ့စပ်ပုံများ… ဩချရလောက်ပေ၏….
ပိစိကွေးတော့ ကုသိုလ်မရချင်ပါဘူး…….. ဟီး
ပြသောသူ ကုသိုလ်ရ၏ …………
ကောင်းလှောင့်တေး….ကောင်းလှောင့်တေး….။ မြင်ရတာများတော့ လဲ မဆန်းတော့ပါဘူး။
ဖင်ဖြူလေးတွေ မြင်ရင်တော့ ဆွဲဆောင်အားကောင်းရင် ကြည့်မိပါရဲ ့။ တချို ့ကျတော့လဲ ဂျွတ်တွေနဲ့ဖင်မဲကြီးတွေ..။ ဒီနိုင်ငံ ရာသီဥတုနဲ ့က ဒီလိုဝတ်မှပဲ အပူသက်သာမှာ။ သို ့သော်လည်း အမျိုးသားများကတော့
နွေခေါင်ခေါင်မှာ လည်ထောင် စွယ်တာနဲ့DOwn Jacket တွေနဲ ့ဗျား။
လက်တွေ့ကျကျ .. အဲဒီလိုဓါတ်ပုံတပုံလောက်တော့ .. သတင်းစာအတွက် .. ဝယ်ချင်သား..။
သမိုင်းမှာ ကျန်ခဲ့ဖို့ မှတ်တမ်းတင်ထားပေးခဲ့ဖို့ပါ…။
ဆရာသမား တကယ်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ အချိန်နည်းနည်းပေးပြီးရိုက်မှနဲ့တူတယ်။ ရိုက်ပြီးလို့မှမဝယ်ရင်တော့ စိတ်ဆိုးမှာ…..။
ကိုဖက်တီးကို တာဝန်ပေးလိုက်ပါလား .. သူက မြေနီကုန်းနဲ့ လှည်းတန်းတဝိုက် ဓါတ်ပုံရိုက်နေကြဆိုတော့ .. အဲ့ဒီလို အလန်းလေးတွေ အဲ့ဒီမှာ စည်တယ် ။
ဒီနိုင်ငံမှာလည်း အတော်များများက ထိုင်ကားယား ၊ ထကားယားတွေဖြစ်ကုန်ကြပါပြီ … ။ ပုံထဲမှာ ပြထားတာက တော်သေးတယ်… တစ်ချို့ကောင်မလေးတွေဆို ဘောင်းဘီက ဆီးစပ်ရောက်နေပြီ …. အဲ့ဒါတွေဝတ်ပြီး ဘတ်စ်ကား စီးတယ် … ကြည့်တဲ့လူတောင် မဆီမဆိုင် ဘယ်တော့ ကျွတ်ကျမလဲ တွေးပူမိသေးတယ် .. ။
ကျုပ်ကတော့ မိန်းကလေးတွေ Jean Pant ဝတ်တာ ပိုပြီး လုံခြုံမှုရှိတယ်လို ့မြင်တယ်။
ထမီနဲ့စာရင် Rape ဆရာတွေ လက်က ရုန်းနိုင်ဖို့အခွင့် အရေးပိုများတယ်။ ထမီကတော့ သူ့အလိုလိုနေရင်း
တောင် ကျွတ်ကြနေကျတော့။ တခါတလေ ရှေ ့မကြည့် နောက်မကြည့် ရုံခါရင် ဝင်းခနဲ လက်ခနဲ လျှပ်စီးတွေလက်နေကြတာ ဘောင်းဘီဝတ် ကောင်မလေး ကောင်မလေးတွေ အရှုံးပေးရမယ်။
ချက်ကလေးနဲ ့ဖင်တဝက်လောက်ဖော်တာကတော့ဗျာ။ India ရုပ်ရှင်တွေကြိုက်တဲ့ မြန်မာတွေ အတွက် အသစ်အဆန်း မဟုတ်လောက်ပါဘူး။ ကျုပ် အသိ ကောင်မလေး တစ်ယောက်က မြင်မြင်သမျှ ဖင်ပေါ်ချက်ပေါ်မလေးတွေကို မလွတ်တန်း အတင်းတုတ်နေရာက တရက်ကျတော့ သူကိုယ်တိုင် Skinny ချက်ဖော် ဝတ်ပြီး ထွက်လာတာပဲ။ ဖြစ်နိုင်ရင် T. panty ဝတ်ချင်သလား မပြောတတ်ဘူး။
လှမှန်းသိရက်နဲ့ကိုယ် မဝတ်နိုင်သေးတာတွေကို သူများ ဝတ်တာ မြင်ရင် ပစ္စည်းမဲ့ ဒေါသကြောင့်
အမျိုးမျိုးပြောကြပြီး ကိုယ်ဝတ်တဲ့ အခါကျတော့ ရူးချင်ယောင် ဆောင်ကြတာပေါ့ဗျာ။
လှလှပပလေးတွေ ဝတ်တာ ဘာပေါ်ပေါ် တော်သေးတယ် .. ပုံဆိုး၊ ပန်းဆိုးတွေ ဝတ်ရင်တော့ ဘာနဲ့ တူမှန်းကို မသိပါဘူး ။
ဘောင်းဘီဝတ်တာ မကောင်းဘူးလို့မပြောပါဘူး … ကိုယ်တိုင်ကလည်း တစ်ခါတစ်ရံ ဝတ်ဖြစ်တာပဲ … နေရာလေးတော့ ကြည့်ရတာပေါ့ … ။ အလိုက်ကန်းဆိုးမသိပဲ ဖင်တဝက်လောက်ဖော်ဝတ်ပြီး သူများဆွမ်းကျွေးသွားစားတာတို့ ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားတာတို့ကတော့ မသင့်တော်ဘူးပေါ့ .. ။ ကိုယ့်ရှိလို့ ကို်ယ်ဝတ်တာ ဆိုပေမဲ့ … ကိုယ့်ရဲ့ အဝတ်စားက ၊ ကိုယ့် ဂုဏ်ငယ်စေမဲ့ အခြေနေမျိုး ဖြစ်လာခဲ့လျှင် ပြုပြင်သင့်တာပဲ မဟုတ်ဘူးလား ။ တောင်းမှာ အကွပ်၊ လူမှာ အဝတ်တဲ့လေ .. ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က ဗရန်းဗတာ အလှူပေးတဲ့ လူဒါမှမဟုတ် ၊ ရောင်းမကုန်တဲ့ ပစ္စည်း ဝါကျွတ်အမှီ ထုတ်ချင်လို့ ပရိုမိုးရှင်း လုပ်နေရင်တော့လည်း … တေမိပဲ လုပ်နေတော့မယ် … ။
ဖင်တစ်ဝက်ပေါ်အောင် ဝတ်တာကို လှတယ်လို့ ဘယ်သူမှ မပြောဘူး ။ တဏှာရူး နှာဗူးတွေသာ ကျေနပ်ပြီး ၊ မကြင်ရလည်း မြင်နေတဲ့ဘဝမှာ ဒါလေးတွေကြည့် အပန်းဖြေနေတာ ။
အခု ခေတ် ကောင်မလေးတွေ ဝတ်ကြတာ လှချင်လို့ ဝတ်ကြပေမဲ့ ဘယ်လို နေရမယ် ဘယ်လို ထိုင်ရမယ် ဆိုတာ သတိမရှိကြတဲ့ ကိစ္စပါဘဲ။
ဥပမာ နိုင်ငံခြား သတင်းဌာန မှာ သတင်းကြေညာတဲ့ အမျိုး သမီး ပေါင်တဝက်ဘဲ ရှိပြီး သတင်းထိုင်ဖတ်နေပေမဲ့ အတွင်းကို မမြင်ရဘူး ဒူးစိထားလို့.. ဒီမှာက ကောင်မလေးတွေ ဝတ်သာဝတ်တယ် ထိုင်ပုံ ထိုင်နည်းက အစ နားမလည်ဘူး ပေါင်တို စကတ်ဝတ်ရင် ဒူးစိထားရမယ် ပေါင်ချဲပြီး ထိုင်ရင်တော့ အတွင်းက အရောင် ဘာအရောင်လဲ လူမြင်တာပေါ့။
ဂျင်းဘောင်ဘီ ဝယ်ဝတ်ရင် ဒီလိုဘဲ ခါးအရမ်းပေါ်တယ် ဝယ်လာရင် ဆိုင်မှာ သွားပြင်ရတယ် ဆိုင်မှာ ၁၀၀ဝ ပေးပြီး ပြင်လိုက်ရင် လုံးဝ ကွက်တိ ပွတာ ချောင်တာ မဖြစ်တော့ဘူး။ အကြံပေးတာပါ။ ခါးလွတ်ပြီး ပေါ်နေတော့လည်း သူများ ကဲ့ရဲ့ စရာ ဖြစ်တာပေါ့။
ကိုနီ တယ်ခက်တဲ့လူ ဘာတွေစားနေကျတာမဟုတ်ဘူး ဘာတွေရောင်းနေတာလဲလို ့မေးပါဗျ။
ကျုပ်ကတော့ အိုးကြိုက်တော့ အမြဲတမ်းဝယ်တယ်။ ဘာလို ့လဲဆိုတော့ ယောကျာင်္းဖြစ်လို့။ တနည်းပြောရရင်
ဘူးတယ်ဗျာ။ ငဒူး မှ မဟုတ်ပဲနော။
ကျုပ်ကတော့ နေကာမျက်မှန် အရောင်ရင့်ရင့်ကို အိတ်ကပ်ထဲ အမြဲဆောင်ထားတယ်။ :cool:
အားလုံးပဲ ကောင်းပါတယ်…….မြင်သမျှ .တွေ့သမျှ …….စားချင်ဝါးချင် တယ်ဗျာ
ngmiii77 ရေ လူကြီးဆိုတာတစ်ခါတစ်လေကျတော့ ပြတာကိုမမြင်ချင်ယောင်ဆောင်ပြီး နေရတယ်။ ပေါ်တင်ကြီး ကြိုက်ပါတယ်ဆိုပြီး လက်ညှိုးထိုးလို့ မကောင်းဘူးဟ
အနောက်ကနေ ရေအေးအေးလေးနဲ ့ပက်ထည့်လိုက်တာ
မီးကတော့ အလုပ်ထဲက ကောင်မလေးတွေ ရှေ့မှာ အဲလိုလာနေရင် ပေါ်နေတဲ့နေရာကို နောက်ကနေ ဖြန်းကနဲ ရိုက်ပေးလိုက်တယ် … မကြိုက်လဲ မတတ်နိုင်ဘူး … ကိုယ်လဲ ဘောင်းဘီဝတ်တာပဲ … အဲလိုကြီးတော့ မဖြစ်ပါဘူး … မပေါ်အောင်ဝတ်ရင် မပေါ်ပါဘူး … တမင်သက်သက်ပေါ်အောင်ဝတ်နေကြတာ ခက်တယ် …
အခု ခေတ် ဂျင်းပဲန်းစ ဝယ် ရင် ချက်ပြုတ် ပုံ ပဲ ဝယ်လို့ရ တယ် ။ ရင်ဂေါင်း လောက် ဘောင်းဘီ မရောင်းတော့ ဘူး ။ ဒါပေမဲ့ ခါးရှည် အင်း ဂျီ နဲ့ဆို လုံခြုံ ပါ တယ် ။ တမင်ပြ ချင် တာ နဲ့ ရိုးရိုး သားသား က ခွဲ လို့ရပါ တယ် ။ ပြတော့ လည်းကြည့် လိုက် ပေါ့ ဟုတ် ဖူး လား ။
သူကြီးရေ အဲလိုပုံ တစ်ပုံကိုဘယ်လောက်ပေးမလဲ ကြေးကြိုက်ရင် ရိုက်ပေးမယ်။
ခေတ်လွန်တာတော့ စိတ်ပျက်စရာပါ ။
ခေတ်လွန်တာမဟုတ်၊ ခေတ်ပျက်တာ။ ခေတ်ပျက်တာ…။
မှတ်မိသေးတယ်။ ဆူးလေနားမှာ အထမ်းသည်ဆီက ရွှေရင်အေး ဝယ်သောက်နေတုန်းဖမ်းတယ်ဆိုလို့ အထမ်းသည်က ပြေးတာ တန်းနေတာပဲ။ မနောလက်ထဲမှာပန်းကန်လုံးကြီးကျန်ခဲ့တာ ဘယ်လိုက်ပေးရမှန်းမသိဘူး ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။
ဒုက္ခပါပဲ … တစ်နှစ်ကျော်တောင် ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ ပို့စ်ကို … အစပြန်ဆွဲထုတ်ကြတယ် …. ။
ပို့စ်အဟောင်းတွေ အသစ်ဖြစ်တာ ပြသနာမရှိဘူး …. ။ ငါ့ရင်ထဲက အလွမ်းတွေ နှစ်ဆတိုးလာလျှင် ……. ပြသနာရှိတယ် ….. ။